Nepal Dayari | ओहो ! के भयो यो ?यस्ता बुढा बाजेको खुट्टा नै प्वा ल परेपछि हि ड्नै न सक्ने भए (भिडियो हेर्नुस्)
ओहो ! के भयो यो ?यस्ता बुढा बाजेको खुट्टा नै प्वा ल परेपछि हि ड्नै न सक्ने भए (भिडियो हेर्नुस्)
फागुण १४, २०७८ शनिबार ७६ पटक हेरिएको
५० वर्षीय बुबाको प्वाल पारेको खुट्टा कठै बरा। नाम शंकर महतो , ठाउ चै सर्लाही उमेरले ५० वर्ष उहाँको किलाले घोचेर खुट्टा प्वाल पर्यो । अहिले काठमाडौ मा रहेको तर गाउँ जानको लागि पैसा नभएको भन्दै रुदै आफ्नो ब्यथा सुनाउछन।
बुद्ध पार्कमा झाडु चलाउने गरेर आफ्नो गुजारा गर्दै आएको बुबा सुनाउछन। त्यही बस्नको लागि बस्ने ठाउ दिएको रहेछ। उहाँ बस्न थालेको २०/३० वर्ष नै भएको सुनाउछन। किलाले झोचेको ५/६महिना भएको र अहिले खुट्टा मा प्वाल पारेको सुनाउछन।
श्रीमती छोराछोरी सर्लाही मै रहेको र ४ जना ज्याइ रहेको तर उपचार कसैले नगरेको र आफू सग उपचार गर्न पैसा पनि नभएको उनाउछन क ठै । पहिला धेरै नै दुख पाएर येता आयेको उनु सुनाउछन।
हेर्नुस भिडियो :-